War Saxaafadeed: Aqalka Sare oo wafdi xal raadin ah u diraya Maamul Goboleedyada | Saadaal Media
War Saxaafadeed: Aqalka Sare oo wafdi xal raadin ah u diraya Maamul Goboleedyada
Magaalada Muqdisho, waxaa kulan ku yeeshay Xildhibaanada Aqalka sare ee baarlamaanka Somaliya, iyadoo looga hadlay tabashada dowlad goboleedyada, Go’aanada ay xiriirka ku hakiyeen iyo Mooshinada ka dhanka ah madaxda Maamul Goboleedyada.
Kulanka oo ka dhacay Xaruntooda, ayaa lagu sheegay in wafdi xal doon ah ay u dirayaan shanta dowlad goboleed ee kala ah; Jubaland, Puntland, Hirshabelle, Galmudug iyo Koofur Galbeed, Aqalak sare waxaa ku mideysan 54 Senator oo min 8 umatalaya 4 dowlad goboleed, iyo Somaliland iyo Puntland oo min 11 heysta.
Xildhibaanada aqalka sare, ayaa war saxaafadeed ay soo saareen waxey baaq ugu direen dowladda dhexe iyo Maamul goboleedyada oo ku aadan in xal lagu dhameeyo waxyaabaha ay kala tirsanayaan.
Ujeedka socdaalka ay ku tagayaan Xarumaha dowlad goboleedyada ayey ku sheegeen iney tahay sidii looga wada hadli lahaa arimaha Amniga, Nolosha, Siyaasada, Federaaleynta, maadaama Khilaafka waxyaabaha ugu abdan ay arimahaasi la xiriirto.